Meydka AHN Beeldaaje Faarax Beeldaaje Cabdilaahi Oo Goor Dhow Boosaaso Lasoo Gaarsiiyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Meydka AHN Beeldaaje Faarax Beeldaaje Cabdilaahi Oo Goor Dhow Boosaaso Lasoo Gaarsiiyey
Meydka AHN Beeldaaje Faarax Beeldaaje Cabdilaahi Oo Goor Dhow Boosaaso Lasoo Gaarsiiyey
Waxaa goor dhowr magaalada Boosaaso lasoo gaarsiiyey meydka AHN Beeldaaje Faarax Beeldaaje Cabdilaahi.
Boqolaal qof oo isugu jira Isimo, mas’uuliyiin dowladda ka tirsan, Culimaadiin, eheladiisa iyo bahda Saxaafadda ayaa garoonka ku sugnaa xilligii meydka marxuumkaas lasoo dejinayey.
Meydka Beeldaajaha oo ay qaar kamid ah caruurtiisu wadeen ayaa la filayaa in salaadda duhurka kadib lagu aaso magaalada Boosaaso iyadoo ay aaskiisana ka qayb geli doonaan dadweyne aad u tira badan.
Dhinaca kale waxaa magaalada Boosaaso ilaa shalay kusoo qul qulayey wufuud Isimo u badan oo ka kala imaanayey deegaanada Puntland iyo qaybo kale oo kamid ah dalka
Ujeedada wufuuddaasi ay magaalada Boosaaso uso gaareen ayaana ah sidii ay aaska Beeldaajaha uga qayb qaadan lahaayeen.
Beeldaaje Faarax Beeldaaje Xaaji Cabdilaahi oo kamid ahaa Ismada ugu caansan uguna magaca dheer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya wuxuu 8-dii bishan ku geeriyoodey magaalada Al-ceyn ee dalka Imaaraadka Carabta.
Geerida Beeldaajaha oo ahayd mid si aad ah looga murugoodey ayaa timid kadib markii uu mudo bilo ah ku jiifey Isbitaal ku yaal dalka Imaaraadka halkaas oo lagula tacaalayey jirro uu 3-dii bilood ee noloshiisa uga danbeysey la liitey.
Xiligan waxaa socota qaban qaabo xooggan oo loogu jiro sidii meydka AHN Beeldaaje Faarax Loo aasi lahaa. Horseed Media dib bay idiinka soo gudbin doontaa faah faahin ku saabsan qaabka uu aaskaasi u dhaco.